सिलवाल किन गए इण्डोनेसिया ?
काठमाडौं । प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि फरार रहेका नवराज सिलवाल कहाँ छन् ? आफन्त स्रोत भन्दै उनी मलेसिया पुगेको भनियो । एसियन इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीद्वारा आयोजित ‘इष्ट एसियन इनिसियटिभ्स इन द कम्युनिटी डेभलपमेण्ट विथ स्पेसियल फोकस टु वुमन’ विषयक कार्यक्रममा भाग लिन उनी मलेसिया गएको भनिएको थियो । तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिनेहरुको सूचीमा उनको नाम थिएन । गत मंगलबार दिउँसो ३ बजेसम्म तीन दिनको अवधिमा सात जना सिलवालहरु विदेश गए पनि नवराजको नाम नभएको खबर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारलाई दिइएको छ । अर्थात् नवराज अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएनन् । उनी स्थलमार्गबाट भारत हुँदै मलेसिलया हुँदै इण्डोनेशिया गएका छन् । उनी केही समय स्वदेश नफर्कने अनुमान गरिएको छ । करीब दुई हजार विद्यार्थी र एक सय जति एकेडेमिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको इसियन इन्ष्टिच्युट सन् १९५९ मा स्थापना भएको मलेसियाकै प्रख्यात टेक्नोलोजी कलेज हो । संसारभरका प्रमुख खबर दिनेदेखि त्यसको विश्लेषण गर्दै अनुसन्धानमूलक जर्नल समेत प्रकाशित गर्ने सो संस्थाले विभिन्न अन्तक्र्रियासमेत गर्ने गरेको छ ।
टेलिफोनमा कुरा गरेको भन्दै एक अनलाइनले सिलवालले मलेसियाबाट भनेको भनेर समाचार प्रकाशित ग¥यो । जुन समाचारमा सिलवालले भनेका थिए, म फरार पनि छैन र मलाई पक्राउ गर्नु भन्ने पत्र पनि छैन । अनुसन्धानलाई सघाउन म सधैं तयार छु । म काठमाडौंमा हुन्जेल केही भएन, अहिले कार्यक्रममा आएको मौकामा प्रहरीका केही अधिकारीलाई धम्की दिएर पक्राउको हल्ला चलाइएको छ । उनले यसो भने पनि पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने भएपछि उनलाई भगाइएको थियो र उनले मलेसिया पुगेर आफ्नो पक्षमा लविङ गरिरहेका छन् । सिलवाललाई प्रहरी अधिकारीहरुकै मिलेमतोमा भगाइएको जानकारी दिंदै ती अधिकारीले भने, बाहिर ठूला गफ गर्ने तर डराएर भाग्ने सिलवाललाई अब विस्तारै रेशम चौधरीकै हैसियतमा राखेर खोजी गर्ने र पक्राउ गर्ने काम हुनेछ ।
प्रहरीले किर्ते कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सिलवाल भागेपछि मुद्दालाई पनि बलियो बनाउन खोजेको छ । उनलाई फरार देखाई अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ । सिलवाल पनि प्रहरीको कब्जामा पर्नुभन्दा प्रहरीले मुद्दा दायर गरेपछि अदालतमा उपस्थित हुने तयारीमा छन् । विगतमा सिलवालको मुद्दा हेरेका एक कानुन व्यवसायीका अनुसार काठमाडौंमा रहँदा सिलवाल पक्राउ पर्ने र झण्डै दुई महिना थुनामा पर्ने निश्चित रहेको जानकारी पाएपछि कानुन व्यवसायीहरुले तत्काल प्रहरीबाट बच्न सुझाव दिएपछि उनी फरार रहेका हुन् । देउवा सरकारले सत्ता हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गरिरहेको र संसदको बैठक बस्न फागुन लाग्ने भएकोले सिलवाल सो समयसम्म फरार रहनसक्ने अनुमान प्रहरीको छ । पर्चाकारितामार्फत् ठूलो कुरा गरे पनि सिलवाल प्रहरीबाट बच्दै प्रहरी अधिकारीहरुलाई मुद्दा कमजोर बनाउन केही अधिकारीहरुसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको भनेर त्यसको खोजबिन गर्न प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले निर्देशन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । महानिरीक्षक अर्यालले मुद्दाको बारेमा सार्वजनिक चर्चा नगर्न निर्देशन दिंदै छानबिन चाँडो गर्न र सिलवाललाई अभियुक्तको रुपमा सबैतिर फाइल बलियो बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
सिलवालले जित्ने अवस्था आउँदा तत्कालीन गृहसचिव र हालका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र महानिरीक्षक अर्याल नै कमजोर बन्ने भएकोले मुद्दालाई बलियो बनाउने खेल भइरहेको पनि सत्य हो । तर रेग्मी र अर्यालले प्रहरी फोर्सभित्रै सोचे जति सहयोग नपाइरहेको गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । अहिले सिलवालका केही सहयोगीहरु नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै मुख्य सचिव रेग्मी र प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल बर्खास्तीमा पर्ने धमास दिएर मुद्दालाई कमजोर बनाउन लागिपरेका छन् । उनीहरु सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राजनीतिक इशारामा सिलवालमाथि आदेश दिएको प्रचार समेत गरेर पराजुली, रेग्मी र अर्याललाई कामै नलाग्ने हुन् भन्ने देखाउन खोजिरहेका छन् । तर वास्तविकता भने त्यस्तो छैन ।
यदि सिलवालले कुनै गलत काम नगरेको भए पक्कै पनि लुकेर बस्नुपर्ने थिएन । तर सिलवाल नयाँ सरकार बनेपछि सत्तापक्षको सांसद भएर मुद्दालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने षडयन्त्र गर्दै लुकेर बसेका छन् । सम्भवतः अदालत र प्रहरीलाई नमिलाएसम्म प्रकट पनि हुने छैनन् । उनी अहिलेको सरकार आफ्नो विपक्षमा रहेको प्रचार गर्दै सहानुभूति बटुल्न खोजिरहेका छन् । देउवा सरकार सिलवालको विपक्षमा रहेको साँचो हो । तर सिलवाल पनि ठीक भए भएर होइन, सरकार र सत्ताकै प्रयोग गरेर मुद्दा जित्ने र सांसद जोगाउने दाउमा छन् । मुद्दा हारेमा सांसद पद खुस्किने निश्चित रहेका कारण उनी जसरी भए पनि किर्ते कासमु प्रकरणबाट उम्कन चाहन्छन् । तर उम्कछन् या फस्छन्, त्यो भने भविष्यले नै बताउनेछ । अहिले यतिमात्र भन्न सकिन्छ, इमान्दारिता र ठूला कुरा गर्ने सांसद सिलवाल किन रेशम चौधरीजस्तै लुकेर बसिरहेका छन् ?